कस्ता ऋणीले पुनरकर्जा पाउँछन् ? के छ ऋण लिने प्रक्रिया ?
काठमाडौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई पुनरकर्जा लिन बोलाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले वर्गिकरण गरेको क्षेत्रमा परेकामा ऋणीले पुनरकर्जा न्यूनतम १ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशत ब्याजदर अनुुदानमा उपयोग गर्न पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले स्थापना गरेको पुनरकर्जा कोष बैंक तथा वित्तीय सस्थाद्वारा सञ्चालन भइरहको छ ।
गत आवको असार मसान्तसम्म ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् प्रवाह भएको छ । पुनरकर्जा कस्ता व्यक्तिले उपयोग गर्न पाउँछन् भन्नेबारेमा धेरैमा द्विविधा नै छ । ब्याजदर अनुदानमा बैंकले कर्जा लिनका लागि आवेदन दिन आह्वान नै गर्दा पुँजी अभाव भएका हरेकको चाहना हुन्छ पुनरकर्जा उपयोग गर्ने ।
कस्ता ऋणीले पुनरकर्जा पाउँछन् ?
विशेष पुनरकर्जाका लागि निम्न मापदण्ड पुरा भएको हुनुपर्ने
साधारण पुनरकर्जाका लागि निम्न मापदण्ड पुरा भएको हुनुपर्ने